M/weyne Waare oo ku Sheegay in 90% magaalda Beledweyne biyuhu ka sara mareen… – Hagaag.com
M/weyne Waare oo ku Sheegay in 90% magaalda Beledweyne biyuhu ka sara mareen…
Posted on 30 Oktoobar 2019 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in Boqolkiiba Sagaashan magaalada Beledweyne ay biyuhu ka sara mareen.
Madaxweynaha oo maalintii shalay ka qeybgalay Aaska Shan Ruux oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay biyaha Wabiga kaddib markii la rogmatay Doon ay la socdeen bartamaha magaalada.
Wuxuu sheegay in marka la eego xadiga Fatahaada ku dhufatay magaalada la oran karo waa tii lagu qiyaasi jiray 50kii sano mar in ay dhacdaa, hase ahaatee labo sano oo isku xigtay ay magaalada ku dhufteen.
”Anniga waan garran karaa, Fatahaaddan oo kale waxaa lagu qiyaasi jiray in 50kii sano mar ay dhacaan, laakiin in ay labo sano iska soo daba-noqoto ma aha wax caadi ah, arintan waxey u baahan tahay talo, shirkii ugu danbeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa laga wada hadlay in arintan qorshe laga yeesho gaar ahaan maamulka Wabiga marka uu Soomaaliya soo galo ilaa Itoobiya” ayuu yiri Madaxweynaha Hirshabeelle.
Muuqaal dusha sare laga qaaday magaalada in gabi ahaanba magaalada ay siman yihiin biyaha oo meel bannaan aysan jirin, taasoo muujineysa in Fatahaaddani tahay tii ugu xoogga badneyd ee soo marta Beledweyne.
Madaxweyne Waare ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka iyo beesha caalamka marka laga soo tago kaalmada iyo gargaarka Bani’aadanimo loo baahan yahay in qorshe iyo go’aan mideysan laga qaato in mar kale sidan oo kale aysan dhicin, maarana loo helo Fatahaaddaha is daba jooga ah ee ku dhufta magaalada.